Xidigaha kooxda Real Madrid oo si weyn ugu taageerayo Luka Modric dagaalka uu kula jiro Cristiano Ronaldo – Gool FM
(Real Madrid) 08 Sept 2018. Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Luka Modric uu taageera xoogan helyo, kaasoo dhawaan ku guuleystay ciyaaryahanka ugu fiican yurub xili ciyaareedka 2017-2018.
Garab istaaga ay xidiga kooxda Real Madrid u muujinayaan Luka Modric ayaa yimid kadib dagaalka uu kula jiro haatan laacibka kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo.
Wargeyska “Marca” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in qolka labiska kooxda Real Madrid uu haatan ka socdo olole lagu doonayo in Luka Modric uu markale ku garaaco Cristiano Ronaldo abaal marinta FIFA The Best ee ah xidiga ugu wanaagsan aduunka, kadib markii uu dhawaan kaga soo guuleestay tii UEFA.
Wargeyska “Marca” ayaa sidoo kale soo bandhigay waxa ay ka yiraahdeen arintan qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda Real Madrid waxaana ka mid ah ciyaartoyda ka hadashay Nacho.
“Luka Modric wuxuu u qalmaa waxa uu ku guuleestay iyo abaalmarinta soo socota, sababtoo ah mar walba waa sida ugu fiican”.
Dhinaca kale macalinka cusub ee kooxda Real Madrid ee Julen Lopetegui ayaa wuxuu isna dhankiisa sheegay inuu ku qanacsan yahay in Luka Modric uu ku guuleysan doono abaal marinta FIFA The Best.
“Waxaan si buuxda u aaminsanahay in Luka Modric uu u qalmo ciyaaryahanka ugu fiican aduunka ee FIFA The Best xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay, waana inuu guuleystaa”.